चाडपर्वको खानपिन — samadhannews.com
डा. सुवास भट्टराई
पाेखरा, १९ कार्तिक:
– शरीर तन्दुरुस्त राख्न र चाडपर्वलाई उल्लासमय बनाउन खानपिनका केही पक्षमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ ।
नेपालीको महान् चाड दसैं सकिएको छ । अब तिहारको रमझम सुरु भएको छ । दसैं, तिहारमा लामो सार्वजनिक बिदा हुने हुँदा यो समयमा विदेशमा काम गर्नेहरु घर फर्किन्छन् । देशकै अन्य ठाउँमा काम गर्नेहरु पनि घर आउँछन् । चाडपर्वका बेला नेपालका सुनसान गाउँहरु पनि गुलजार हुन्छन् ।
दसैंमा मासु धेरै खाइने, चिप्लोचाप्लो र फ्राइ गरेका चिज बढी खाइन्छ । सिंगै खसी नै घरमा ल्याएर, ढालेर, १०, १२ दिनसम्म निरन्तर मासु खाने हाम्रो प्रचलन छ । मासु र चिल्लोका साथसाथै मदिरा सेवन पनि अत्यधिक हुने गरेको पाइन्छ ।
मासु खान, राम्रो लुगा लगाउन दसैं, तिहारै कुर्नुपर्ने जमाना गइसक्यो । अहिले दिनदिनै चाहे पनि मासु खान पाइने अवस्था बनेको छ । खाजामा मःम, सुकुटी, चाउमिनमा पनि मासु खाइरहेका छौंं । यसरी दिनहुँ जसो लामो समयसम्म मासु खाइरहँदा शरीरलाई केही नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छन् ।
मोटो शरीर, रगतमा कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड भएका व्यक्तिले सकभर मासु नखानु राम्रो हुन्छ । मासु, चिल्लो, मदिरा, साथसाथमा चुरोट, खैनी, सूर्ति बिहान, बेलुकै धेरै मात्रामा खाँदा धेरै बिरामी सिकिस्तै भएर स्वास्थ्य संस्था आइपुग्छन् । केहीलाई भने रोगले च्याप्न थाल्छ । केहीमा नयाँ रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ ।
दसैंताका मानिसलाई खासगरी २, ३ थरिका रोग धेरै देखा पर्न थालेका छन् । कसैलाई पखाला लाग्ने, कसैलाई वान्ता हुने गरेको देखिन्छ । कसैलाई अकस्मात अत्यधिक पेट दुखेर, कुनै कुनै बिरामीलाई अचानक रोगले च्यापेर आकस्मिक उपचारमा ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिएको छ । रक्सी बढी खाँदा हुने समस्या लिएर पनि बिरामी उपचार गर्न आउँछन् । तर, यो समयमा डाक्टरहरु पनि बिदामा बस्ने हुँदा उपचार पाउन पनि सहज हुँदैन ।
चाडपर्व नमनाउनुहोस् भनेको होइन, मनाउनु राम्रो कुरा हो । उल्लासपूर्वक मनाउनुपर्छ । माछा, मासु पनि खान सकिन्छ । पेटको, कलेजोको समस्या भएकाहरुले भने केही सावधानी अपनाउनु भयो भने यस्ता कष्ट उठाउनु पर्दैन । यसबाट एकातिर स्वास्थ्य ठीक रहन्छ भने अर्काेतिर पर्वको उल्लास पनि अनुभव गर्न पाइन्छ ।
हामी बिरामीलाई सकभर बोसोयुक्त खाना कम गर्न सल्लाह दिन्छौं । फ्राइ होइन, पकाएर मासु खाऔं । थोरै थोरै खाऊ, बरु पटक, पटक खाऊ । रातो मासु भन्दा बरु कुखुराको मासु, माछा खानु राम्रो हुन्छ । रक्सी कुनै पनि अवस्थामा राम्रो होइन । रक्सी सकेसम्म नखाऔं । अत्यधिक रक्सी खानु भनेको अनेक खोजिमलाई निम्त्याउनु हो ।
चाडपर्वमा खाइने मिठाइहरुमा पनि ध्यान दिऔं । रंग हालेर आकर्षक बनाइएका मिठाइ हानिकारक हुन्छन् । यस्ता कुरामा ध्यान दिनुभयो भने एकातिर तपार्ईको स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहन्छ भने चाडपर्वलाई उल्लासपूर्ण तवरले मनाउनु पाउनुहुन्छ । ग्यास्ट्रिक, अल्सरका कारण भनेकै अहिलेको नराम्रो खानपिन, चिल्लोचाप्लो, बोसोयुक्त खाना, माछा, मासु र रक्सीको धेरै प्रयोग नै हुन् ।
कतिपय नेपाली जनजातिमा रक्सीलाई सांस्कृतिक रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । रीति पूरा गर्नु एउटा कुरा होला तर रक्सीले आफूलाई नै खाने गरी खाए अनेक समस्या यसले ल्याउँछ । कृत्रिम खालका खानेकुरा यथासम्भव खाँदै नखानु राम्रो हो ।
दसैं, तिहारमा पनि फलफूल, सागसब्जीको मात्रा खानामा बढाउनुपर्छ । रेलरोटी बोसोमा पकाउँदै नपकाऔं । बासो खानै नहुने चिज हो । रोटीसँग खाने तरकारी, अचारमा पनि ध्यान दिऔं । मासुसँग सँगै सागसब्जी र फलफूल पनि खानु राम्रो हुन्छ । शरीरलाई चाहिने मात्रामा पानी पिउनुपर्छ ।
यसो गरे हामी ग्यास्ट्रिक, अल्सर र रक्सीले गर्न सक्ने असरबाट बाच्न सक्छौं । अरु बेला नखानेहरु र बिरामीले पनि चाडमा त खानै पर्छ भनी सकेसम्म रक्सी र मासु खाने गरेको पाइन्छ । तास खेल्ने, होहल्ला गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरु पनि यदाकता देखिन्छन् ।
दसैंमा ५, ६ दिन रक्सी, चुरोट खाँदा छाडेकाहरुमा फेरि यसको लत लाग्छ । भर्खर सुरु गरेकाहरुमा पनि बानी नै पर्छ । यो बेला मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएर दुर्घटना भएका समाचार पनि सुनिन्छन् । चाडपर्वका नाममा मनमौजी खानपिन र अस्वस्थकर जीवनशैली नअपनाऔं ।
(डा. भट्टराई ग्यास्ट्रो कयर पृथ्वीचोक, पोखरामा कार्यरत छन् ।)
डेंगु संक्रमणबाट बचाैं